Dowladda Qatar oo shaacisay inay kordhineyso taageerada Soomaaliya | Arrimaha Bulshada
Home News Dowladda Qatar oo shaacisay inay kordhineyso taageerada Soomaaliya
Dowladda Qatar oo shaacisay inay kordhineyso taageerada Soomaaliya
Bulsha:- Wasiirka Gaadiidka Xukuumadda Soomaaliya Duran Axmed Faarax ayaa Xafiiskiisa ku qaabilay Danjiraha Dawladda Qatar ee Soomaaliya Xasan Bin Xamsa Hashem waxayna kawada hadleen iskaashiga labada dal iyo sidii kor koogu sii qaadi lahaa.
Ugu horayn Danjire Xasan ayaa Wasiirka warbixin kasiiyay iskaashiga labada dal iyo sida saaxiibtinimadda leh ee dawladda Qatar uga qayb qaadanayso dib u dhiska Soomaaliya.
Wuxuu sheegay in Soomaaliya ay ka fuliyeen mashaariic horumarineed haatan ay diyaar u yihiin in intaas ka badan labada dal horumarkooda iska kaashadaan.
Wasiirka Gaadiidka Duran Farah ayaa ka mahad celiyay taageerada Qatar ee Soomaaliya, iyadoona dhankiisa uu sheegay in muhiimad wayn ay leedahay iskaashi dhanka duulimaadyadda iyo horumarinta Garoomada diyaaradaha ah inuu dhex maro dawladdaha Soomaaliya iyo Qatar.
Ugu dambayn Wasiir Duran Farah ayaa adkeeyay iskaashiga labada dal ee Soomaaliya iyo Qatar, waxaana xusid mudan in dowladda Qatar Shantii sano ee la soo dhaafay ay siweyn taageero gaar ah u siineysay Madaxda Villa Somalia.